किन मान्दैनन् लोकदोहोरी गीतमा खेल्न नायिकाहरु? यस्तो भन्छन् निर्देशक बिक (भिडियोसहित) « Light Nepal
किन मान्दैनन् लोकदोहोरी गीतमा खेल्न नायिकाहरु? यस्तो भन्छन् निर्देशक बिक (भिडियोसहित)
Published On : 18 November, 2018 7:20 pm
काठमाडौं, २ मंसिर । लोकदोहोरी गीत हामी नेपालीको पहिचान, संस्कृति र मौलिकता झल्काउले एउटा मिठो भाका हो । लोक तथा दोहोरी, लोक संस्कृती लोक गीत पाखा पखेरीमा गुन्जने गर्दछन् । लोक संस्कृतीलाई बचाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो । कतिपय संगीतलाई नबुझने अबुझ ब्यक्तीले लोक संस्कृतीको खिल्ली उडाउनुका साथै लोक संगीत र लोक संगीतमा लागेका कलाकारहरुलाई हेप्ने गरेको पाईन्छ ।